शुन्य समय : 2021
आज म तिम्रो लागि कथा लेख्छु । उसका मिठा नलागे नि सुन्नै पर्ने शव्द हुन यी ।
हाँसो लाग्छ सुनेर । मानौ उसका कथाका पात्रहरुका रुपमा उभिनुपर्ने रे म ।
मानौ यी लोग्ने मान्छेका जातले अरु केही पाँउदैनन् भेट्छन् त केवल हामी जस्ता छोरी मान्छेका पिडा लाई । अनी लगाँउछन यती धेरै फुर्ती की हाम्रा सारा पिडाका समाधान हुन कती छिट्टै तयार भईदिन्छन् है । सोचिदिन्छन उनिहरु हाम्रा सवै पिडाका उपचार हुन् ।
लाग्दो हो यी सवै वहाना गरेर ओच्छ्यान तताईदिने एउटा मिठो वहाना वनोस् । ओच्छ्यान तताउने वहाना त्यती सस्तो होला र ?
आज पनि चिसिएछ क्यारे उसलाई मेरो चौपट्टै याद आएछ । सायद भरपुर पियो होला । मद्यपानको नसा र जवानीको नसा उस्तै हो सायद उ जस्ताको लागि । अनी म ? कसले वुझ्न सक्छ मेरो यो छटपटी अनी पिडाहरुलाई ? पटक पटक पिल्सिएकी म, पटक पटक उम्किएकी म अनी पटक पटक लुटिएकी म ।
छोरी मान्छेको जिवन साँच्चै अचम्मको छ । चिसिनु, तात्नु फेरी चिसिनु नियतीको खेलमा होमिनुपर्ने । अनेकौँ स्वार्थमा गाँसिएर पटक पटक लुटिएकी म । लुटिनुको हदभन्दा माथी सम्म पुगेर लुटिएकी म । उसलाई के थाहा हरेक पटक लुटिँदा भक्कानिएको मन लाई सम्हाल्न कती गहारो हुन्छ । आफन्त वनेर, जिवन साथी बनेर, मिल्ने साथी बनेर, सहकर्मी बनेर अनी अझै फेसवुकमा अल्झाएर, टिकटक ह्वाट्सअप ईन्स्टाग्राम के के मा झुत्ती खेलेर आउने सँग लुटिएरै जिउन कती गहारो हुन्छ भनेर ।
यही पंक्ती दोहो¥याएर पढ्यो होला सायद । आखिर म लुटाँउदै हिड्ने त परेँ । सोच्ला दुनियाँलाई लुटाँउदा म चाँही किन पर मिल्किन्छु ? सायद बुझ्दैन माया गर्नेलाई लुटाँउन सकिन्न । म सक्दिन उसको निश्चल प्रेमलाई दोवाटोमा मिल्काउन अनी सक्दिन आफुलाई साँच्चै माँया गर्ने एउटा मनलाई यो विटुलो शरिर सुम्पेर क्षणिक खुशी दिन । सायद खुशी त चौपट्टै होला मलाई पाँउदा । कल्पना गर्छु उसका ति कोमल भाव बोकेको मन सँगै मन मिसाएको तर सक्दिन म आफुलाई सम्हाल्न ।
कल्पनाशुन्य हुन्छु अनी आँउछ उसकै सारा यादहरु नमिठो गरी । याद त मिठो हुनुपर्ने हो तर किन किन उसको याद साँच्चै नमिठो भईदिन्छ । कमजोरी हो वा उसको माँयाको जित ?
सम्झन्छु कतै उसले मलाई जितिरहेको त छैन ? म पल पल हारिरहेको त छैन ? साँच्चै मलाई उस सँग हार्न मन छ उसको माँया सँग हार्न मन छ । उसको माँयामा हराउन मन छ कहिल्यै उम्किन नसक्ने गरी । तर वास्तविकता यही हो नदिको दुई किनारा भेटिन संभव छ र ? आफ्नै जिवनमा रमाउनुपर्ने उसको वाध्यतालाई म कसरी हस्तक्षेप गर्न सकुँला र ? तर रहर छ हस्तक्षेप गर्न, उसका हर चाहना पुरा गर्न, उसका मृत भईसकेका भाव हरुलाई हस्तक्षेप गरी गरी उजागर गर्न । तर खोई ?
उसका यादहरुले पटक पटक चिथोर्दा लाग्छ जिवन यत्तिकै सेलाईदिँउ । आखिर के नै पो रहर छ र वाँकी । तर होईन मेरा आश्रयको खोजी गर्ने कोही नै नभाको त होईन नी म । अनी उ ?
उसका जिवनका कहालीलाग्दा क्षणहरु सुनिसक्दा भावुक हुने मेरो मन उसका कर्तव्य चै भुसुक्कै विर्सिदिँउ र ? उसका जिवनका पाटाहरु सवै भुलेर उसकै अंगालोमा हराईदिँउ र म ? अन्तरआत्माले देला र ?
अनी उसलाई कसले दियो अधिकार मेरो जिवनमाथी धावा बोल्न ? अनी पटक पटक उसका आँशु मिसिएका कहानी उसका मुख बाट सुन्न ? सुरा र सुन्दरीमा लठ्ठ परेको वेला चुहाउने आँशुको मोल म तिर्नु र ? उसका हरेक पटकका धम्की सुनिरहनु र म ?
स्मृतीमा टोलाउन पुग्छु , म कसरी उसको नजिक पुगेँ कसरी उसको दिलभित्र पसेँ अनि आज म कसरी उसैलाई वगरको माछा झैँ छटपटिएको हेर्न लालायीत छु । उत्तर कतै भेट्दीन । सायद म निर्दोश थिँए । दोशी त्यै हो जसले मलाई सवै जान्दा जान्दै पनी माँयामा डुवाएर यादमा तड्पीने वनाईदियो ।
कामको शिलशिलामा भएको भेट विरानो ठाँउ अनी विरानो अवस्थामा आफ्नो कोही माँया गर्ने होस लाग्ने पल । हो त्यसै वेला नजिक भईदियो म सँग । चाहना त म सँग पनी थियो नि उ जस्तै कोही होस जसले मेरा विगत भुलाउन सकोस वर्तमानमा खुशी दिन सकोस अनी सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सिकाउन सकोस । सायद उसमा सवै खुवी पाएछु की वा उसका मिठा कुरामा उसै पो पग्लिएँकी । मेरो कठोर मनलाई फूलसँग दाँज्न सक्ने वनाउन कसैले सिकोस उसैवाट । चोटै चोटले आक्रान्त मेरो जिवनमा वहार छर्ने कोशिश गर्न सिकास उसैवाट । जसलाई मेरा जिवनका हर कमजोरीहरुको ज्ञान भएर समेत हात समाएर सही वाटो पहिल्याउन सिकाउन मन छ उसले पनी उसैवाट सिकोस । माया के लाई भनिन्छ थाहा नहुनेले सिकोस उसैवाट ।
उसका हरेक स्पर्श, मुस्कान, नजिकपनलाई लात मारेर वाध्यतामा टाढा हुँदैछु भन्ने मात्र कल्पना गर्दा नि मन भावुक वनेको छ । वाँकी जिवन कसरी वित्ला थाहा भएन तर यती थाहा छ उसको मायाले मलाई जिवनभर वाँच्ने आड भरोसा अवश्य दिनेछ ।
विदाईका वेला टिलपिलाएका उसका आँखा मनमा झलझली संझदै वाटो लागेको छु टाढा टाढा उसको नजरमा कहिल्यै नपर्ने गरी ।
अन्तिम रात २०७७ साल, वुटवल ।
प्रेशण गर्ने Basanta Subedi समय Wednesday, April 14, 2021
फेव्रुअरी १४ । हासो लाग्छ प्रेम दिवस रे । मेरो लागि एउटा फगत सपना । मानु यो के को लागि ?
जीवनको २५ औँ वसन्तमा छु । यो विच आए धेरै यस्तै मृगतृष्णाहरू । जसले मलाई न हसाँउन सके न रुवाउन नै । मन चोर्ने हरुका भीडमा वाँचेकै छु यस्तै गरी मरी मरी ।
हो यही हो मेरो जीवनको यथार्थता । के को लागि ? न त म भन्न सक्छु न देखाउन नै ।
आजैको साँझ हो । खाना खाएँ । सुतेँ । चाहेँ मिठो निद्रा । सायद गल्ती गरें । हुन्न थियो होला सायद यती मिठो निद्राको कामना गर्न । गरें । मलाई सिकाइएकै थियो मिठो सपना देख्न । मानुँ सपना मिठै हुन्छ सायद दुनियाँकै सवभन्दा मिठो । कति मिठो सपना । कति मिठो । कति मिठो । सबैको कल्पनाभन्दा बाहिरको मिठो ।
हो । दिन त बिताएकै हो । आफ्नै रोजाईमा । अलिअलि हाँसे जस्तो अनि अलि अलि निरास भएजस्तो । तर लाग्छ मलाई किन दिन्छ चासो वारम्वार ? नाता छ के ? जोडिएको छ किन ? किन चाहन्छ जोडिन ?
सुतेथेँ । सायद सपनामै थिएँ । मोवाईलमा मेसेज वज्यो । लाग्यो कसैले भ्यालेन्टाइन विस गर्यो होला । त्यही त छ आखिर । सस्तो अनि तेस्रो दर्जाको मेसेजको निरन्तर आगमनले तर्सिएकी म त्यही सोचेँ । यस्तो लाग्थ्यो म त्यो मोवाईलको भाँडोभन्दा पर वसुँ संगत गर्न नपरोस त्यो भाँडोसँग ।
विरक्तिएको मनले केही आशा गरेछ सायद । यसो मोवाईल खोलें किन किन कसैको मायाको आभास आफै हुन गयो । खोई कारण थाह हुन सकेन । तर अकस्मात त्यो मायाका शब्द किन यती प्रिय लाग्यो नि यस्तो लाग्यो म साँच्चै जिउदो छु ।
यो के शब्द हो मलाई थाहा छैन । किन म माथि प्रयोग गर्छ ? त्यो समेत थाहा छैन । मलाई मन समेत पर्दैन यो शब्द । तर मलाई पटक पटक यही शब्द प्रयोग गर्छ । यही भनेर वोलाँउछ । किन ? केका लागि ?
मोवाईल खोलें । उस्कै रहेछ । हाँसु हाँस्न मन नै छैन । रोउँ त केका लागि रोउँ म । म के हो उसको ?
उही शब्द अनि खोई कता कता माया हो कि लाग्ने उही सम्बोधन । फटाही ।
रिस उठ्छ चौपट्टै । यती रिस उठ्छ न नाप्ने भाँडो पाँउछु न जोख्ने ।
ऊ अर्थात पराई । अर्कैको लोग्ने । परपुरुष ।
मेरा बुझाईमा काम नलाग्ने लोग्नेमान्छे । मलाई केही काम छैन । आफ्नै संसारमा रमाउने स्वार्थी पुरुष हो त्यो ।
के को नाता ? के को प्यार ? के को आफ्नोपन ?
म आज तिम्रा खातिर एउटा कथा लेख्छु ।
उसका मोवाईल सन्देशले मेरा कम्पारा तात्न कति वेर लाग्दैन ।
मायाका आस्वासन दिदै मन चोर्न सिपालु यी लोग्नेमान्छे । अँझै मलाई कथाकी पात्र वनाँउदै पो छ ।
अनायसै मन फिस्स हाँसिदिन्छ । नकच्चरो पुरुष ।
आफ्नो कर्तव्य समेत भुलेर मेरो सुन्दर जीवनसँग समेत खेलवाड गर्न आइपुग्दैछ ।
मोवाईलमाउसका वग्रेल्ती मेसेज आइरहे मायाका अनि धम्कीका समेत । सहिरहेँ एउटी नारीको सहनशील मन वोकेर । वाध्यतामा अल्झेको एउटा निरीह नारी पात्र त वनेँ नि आखिर म । त्यसमा नि उसैको कथाको पात्र वन्दै छु म । थाहा छैन कस्तो पात्र वन्दै छु म । सायद उसका दविएका चाहनाहरुलाई अस्थायी समाधान गरिदिनुपर्ने अपिल वोकेको पात्र वनायो होला । एउटा अहंकारी घमण्डी नकच्चरो पुरुषको आँखामा योभन्दा ज्यादा के हुन सक्ला र ।
आँखाले चिम्म गर्नै चाहेन । किन किन वावा ममिको चौपट याद आयो । लाग्यो वावा ममिको साथ थिएँ भने आज यस्तो व्यक्तिको सामना गर्नु त पर्थेन ।
फेसवुक खोलेँ । त्यहाँ अँझै वग्रेल्ती मेसेजका थुप्रा थिए । ती सबैमा लेखिएका थिए उसले मलाई चाहनुका कारण । सबै हाँसो लाग्ने कारणहरू त थिए । उसका अतृप्त चाहना म वाट पुरा गर्ने अभिलाषा वोकेको रे ।
घृणा लाग्यो आफै प्रति । कसैका अतृप्त चाहनाको प्यासी वन्दिनुपर्ने रे म । उसका लागि । मतलव मसँग कुनै चाहना नै जीवित छैनन् छन् त फगत उसैका अतृप्त चाहना ।
वाध्यतावस जोडिन पुगेको उसको र मेरो संवन्ध यसैको लागि हुँदो हो र ? म त उसको शक्तिलाई पो मान्थेँ । उसका आत्मविस्वासलाई मान्थेँ । उसका संघर्षका कथाहरुलाई मान्थेँ अनि उसका जोश र जाँगरहरुलाई पो मान्थेँ । म नारी हुनुको फाइदा नराम्ररी उठाउन चाहने उसका ती मनलाई मान्ने मसँग कुनै अभिलाषा थिएन । आफूभन्दा कता कता उच्च लाग्ने उसको उच्च जीवनप्रति मोह समेत आँक्न नसक्ने म अनायसै उसका तललो स्तरको व्यवहारलाई पचाउन सक्थेँ होला र ?
फिटिक्कै निद्रा परेन । उही हो फेरि फेसवुक खोलेँ । अन्त ध्यान दिनुअगाडि उसैका मेसेज आए । सुतिनौ र ? कति चासो गरेको ? के को लागि ?
मसँग कुनै साइनो नजोडियोस तर मलाई तिमी हाँसेको मन पर्छ । उसका यी मेसेज हेर्दा म नहाँसी वस्नै सकिन । फिस्स हाँसेँ । किन हो हाज उसका तस्विर नियाल्न पो मन लाग्यो । हरेक तस्विर उदासिन मुहार वोकेर उभिएको पो देख्छु । कि कतै ??
किन किन उसको प्रोफाईल खोतल्न मन लाग्यो । शब्द शब्द नियालेँ । अक्षर अक्षर पढेँ । हरेक तस्विर साँच्चै हेरेँ । उसका उदासिन अनुहारहरू पढ्न मन लाग्यो । पढिरहेँ ।
फलानो उपडेटेड हिज स्टाटस । नोटिफिकेशन वज्यो । उसकै नाम उफ् ।
यो अन्तिम कथा तिमीले पढिरहँदा म यो संसार वाट बिदा हुन सकुँ । तिम्रा जीवनमा कहिल्यै दुःख नपरुन ।
वेनामी स्टाटसले मलाई नै जिस्काए जस्तै भयो ।
हतार हतार वत्ति निभाँए सुतिदिएँ ।
गहिरो निद्रालाई चिर्दै मोवाईल वज्यो साथीले गरिछ । हतार हतार सामाजिक सञ्जाल हेरीहाल भन्दै ऊ ओझेल परी जसलाइृ मैले सबै दिक्कलाग्दो कहानी सुनाएको थिएँ ।
सन्त भ्यालेन्टाइनले प्रेमका खातिर ज्यान गुमाएकै दिन मध्ये रात नवित्दै सामाजिक सञ्जालमा उसको मोटरसाईकल दुर्घटनामा ज्यान गएको समाचार छ्याप छ्याप्ती भइसकेको रहेछ । जीवनमा पहिलोपटक आफू यती धेरै चिसिएको अनुभुत गर्दा म ज्यूदो छु कि छैन पत्तो नपाए झै हुन पुगेछु ।
मध्यरात ११ः४५ फेव्रुअरी १४, २०२१ वुटवल ।
प्रेशण गर्ने Basanta Subedi समय Sunday, February 14, 2021
Labels: कथा सङ्ग्रह, सन्दर्भ लेख हरु, सृजना साहित्य